Posted on: April 2, 2021 1:48 PM
People walking in Shwedagon Pagoda, Myanmar
Photo Credit: Cheng Q
Related Categories: Abp Idowu-Fearon, Anglican Communion, Easter, Myanmar, prayer
Anglican Communion Secretary General urges all Christians to pray for the People of Myanmar
Archbishop Josiah Idowu-Fearon issues an Easter message of hope to Myanmar and her people; and calls on Christians around the world to pray.
The Secretary General of the Anglican Communion, Archbishop Josiah Idowu-Fearon, has called on Christians around the world to pray for Myanmar and her people. In an Easter message of hope, Dr Idowu-Fearon tells the Myanmar people that they are not alone.
Dr Iwodu-Fearon, currently in Nigeria as part of his work as Chair of the Kaduna State Peace Commission, said: “On Easter Day we celebrate the triumph of life over death. The resurrection of Jesus Christ was Good News for the world two millennia ago; and it is still Good News for the world in 2021.
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် ဆုတောင်း
အထက်နိဗ္ဗာန် နှင့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို အစိုးရသော အရှင်မြတ်၊
အရှင့်သားတော် ယေရှုခရစ်တော်ကို သေရာမှ ပြန်လည်ထမြောက်စေသည့်အတွက်
နှင့် ယေရှုမှ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ပေးသနားသော အဆုံးမဲ့ ချစ်မေတ္တာအတွက်
အရှင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင် ချီးမြှောက်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် ရှင်သန်ထမြောက်စေဖို့ ကျွန်တော်မျိုးတို့ ဆုတောင်းပြီး ပေးသနားတော်မူပါ၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုမှသည် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါစေ၊
ကျူးကျော်ရန်လိုခြင်းမှ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါစေ၊
စိတ်ပျက်အားငယ်မှုမှ မျှော်လင့်အားတက်ဖွယ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါစေ၊
သင် နှင့် ဝိဉာဉ်တော်တို့နှင့်အတူ ရှင်သန်နေထိုင်ပြီး ကြီးစိုးသော
ပြန်လည်ထမြောက်သည့် ယေရှုအမည်နာမတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုပါ၏၊
ယခု နှင့် နောင်အဆက်ဆက် ဘုရားရှင်တစ်ပါးတည်းသာရှိတော်မူ၏။ အာမင်။